Ambondrona: nisy nametraka cocktail molotov ny tranona kandida iray | NewsMada
Ambondrona: nisy nametraka cocktail molotov ny tranona kandida iray
Asa fampihorohoroana indray!Tsy mbola manomboka akory ny lalao, efa misy sahady ny karazana fampitandremana eto an-tanana. Tranona kandida iray ho filoham-pirenena notorahan’ny sasany cocktail Molotov, teny Ambondrona. Soa fa tsy nipoaka…
Nisy nametraka cocktail Molotov teo amin’ny tranon’ny kandida ho filoham-pirenena iray, eny Ambondrona, ny asabotsy alina teo. Tsy nipoaka izy io, saingy tavela teo amin’ny vavahady kosa ny tavoahangy nisy lahany vorodamba sy feno lasantsy. Tsy nisy nahita ny olona nametraka azy io. Nanaitra ny tao an-trano ihany ny fisiana zavatra nidoboka, saingy tsy nisy sahy nivoka. Voalaza fa efa ny maraina vao hita teo amin’ny vavahady ity cocktail Molotov ity. Nampandre ny polisy avy hatrany ny tompon-trano. Tonga teny an-toerana ny polisy avy amin’ny BC Anosy nanao ny fizahana sy ny fanadihadiana.
Hatreto aloha, tsy fantatra izay tompon’antoka amin’izy ity sy ny mety ifandraisany amin’ilay kandida ho filoham-pirenena. Raha ity kandida ity mantsy, tsy anisan’ireo olona efa malaza na efa manana raharaha mandringondringotra azy. Tsy fantatra loatra amin’ny raharaha politika, kanefa izao iharan’ny toe-javatra hafahafa izao. Maro ny manombantombana fa karazana fanakorontanana ihany izao, ampifandraisina amin’ny fikasan’ny sasany hanemotra fifidianana.
Tamin’ny andron’ny tetezamita no nampalaza ny resaka baomba sy ny cocktail Molotov. Rehefa mafampana ny toe-draharaha eto amin’ny firenena, mivoaka ny paik’ady ratsy, toy izao. Iza ny mahazo tombotsoa amin’ny fanakorontanana? Matetika tsy tonga hatramin’ny farany ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana amin’ny raharaha miendrika politika tahaka izao. Raha mipoaka tokoa ny baomba sns, ny olona tsy manan-tsiny hatrany no mizaka ny vokany. Hafampana ny raharaha manodidina ny fifidianana raha izao sahady ny fiantombohany.